Ilaka Centre – RN7: taksiborosy nivadika tany anaty hantsana, olona telo indray maty | NewsMada
Ilaka Centre – RN7: taksiborosy nivadika tany anaty hantsana, olona telo indray maty
Io indray koa ! Nitrangana lozam-piarakodia mahatsiravina namoizana ain’olona indray teny amin’ny RN7 tao Ilaka Centre, omaly vao maraimbe. Taksiborosy iray indray no nivadibadika tany anaty hantsana. Vokany, olona telo indray maty, ka anisany ny mpamily izay nosokirina tao anaty korontambin’ny fiara…
Taksiborosy avy any Fianarantsoa hihazo an’Antananarivo ity tra-doza tampoka nivadika tany anaty hantsana misy tanimbary ity, araka ny fampitam-baovao voaray avy amin’ny zandarimaria, nanao fanadihadiana teny amin’ny toerana nitrangan’ny loza. Olona telo indray maty tsy tra-drano ka isan’izany ny mpamilin’ny fiara raha naratra avokoa ny ankamaroan’ireo mpandeha tao anaty fiara. Nanahirana ny fisokirana ny fatin’ilay mpamily satria taraiky tao anaty korontambin’ny fiara. Nanao izay ho afany ny zandary tamin’ny fanaovana ny asam-pamonjena ka efa ny antoandro vao tafavoaka ny fatin’ilay mpamily. Niparitaka avokoa ny entan’ny mpandeha rehetra satria niala hatramin’ny fitoeran’entana mihitsy. Potipotika tsy nisy noraisina ilay taksiborosy. « Tratran’ny torimaso fotsy tampoka teo ambony familiana noho ny harerahana ny mpamily ka izay no ahina ho nahatonga ny loza, saingy efa misokatra ny fanadihadiana momba ity loza namoizana ain’olona ity ka ny valin’izany no mamaritra ny marina rehetra momba izany », hoy ny fanazavan’ny zandary. Nalefa haingana any amin’ny hopitalin’Antsirabe ireo naratra sy ny fatin’ireo niharam-boina.
« Tsy tokony hilalao ain’olona ny mpamily… », hoy ny zandary
Tato ho ato, matetika hitrangana lozam-piarakodia amoizana ain’olona toy izao hatrany eny amin’ny lalam-pirenena, isan’izany ity RN7 ity. Eo aloha ny halaviran’ny lalana, kanefa misy ireo mpamily sasany tsy manaja ny voalaza ao anatin’ny lalàna mifehy ny fitaterana olona amin’ny taksiborosy. « Tsy tokony hilalao ain’olona ny mpamily ary tokony hisy mpamily faharoa mifandimby rehefa lalana mihoatra ny 400 km. Eo koa ny tsy fanaovana dona miverina fa isan’ny mitera-doza izany », hoy hatrany ny fanazavan’ny zandary. Tsy lazaina intsony ny lanjan’entana, izay isan’ny nahatonga ny teo anivon’ny ATT nandray fepetra hentitra tamin’ny alalan’ny tale jeneralin’ny ATT ny Jly Reribake Jeannot fa lasa mifangaro amin’izao fotoana izao ny mpitatitra olona sy ny mpitatitra entana. « Raha sakaosy fotsiny ny entan’ny mpandeha rehefa mandeha taksiborosy teo aloha, amin’izao , lasa miara-dia amin’ny mpandeha hatramin’ny fitaovana fanamboarana trano, eo koa ny moto sy ireo entana hafa mampidi-doza », hoy hatrany izy. Mitera-doza ireny entana ireny, eo aloha ny haveresarana diso tafahoatra miaraka amin’ny lanjan’ny mpandeha hany ka tsy araka ny tokony ho izy intsony ny fandehan’ny fiara sady miteraka fahasimbana haingana izany. Rehefa misahasimba ny fiara dia teraka ho azy ny loza eny an-dalana.